I-Samsung Galaxy Tab iza kulayishwa ngezixhobo, ukulungiselela isipaji! I-Androidsis
Usuku NgoSeptemba 2 kuya kubakho kwaye inokwenzeka ukuba iya kuthengiswa kwakamsinya emva koko nangona kungathatha ixesha elincinci ukufika eSpain kwaye ngesihlandlo iSamsung ilungiselele ingqokelela epheleleyo yezixhobo zecwecwe. Asikalazi ixabiso layo kodwa into esiyaziyo lixabiso lezinto zayo kwaye zithini amaxabiso!
Zininzi izinto ezinokufumaneka ukuze zincedisane nokusetyenziswa kwethebhulethi, phakathi kwazo sinoku kulandelayo:
Ityala lesikhumba ngexabiso elingathethekiyo le- € 41
Isiseko sokutshaja nge Iziphumo ze-HDMI kunye nokunxibelelana kweefowuni kwi-54 Euro
Ikhibhodi yokudibanisa ithebhulethi ngokubeka ngokuthe nkqo kwikhibhodi. Ixabiso layo € 82.
Iadaptha ye-USB. Njengoko sele sibonile, i-Samsung ikhethe ukusebenzisa unxibelelwano ngaphandle kwe-USB esemgangathweni kwaye ke ngoku iyasithengisa iadaptha, akukho xabiso loku.
Sinokuthenga ii-headphone, iadaptha yemveliso evela kunxibelelwano lwakwaSamsung kwimveliso yeRCA kunye nesinxibelelanisi sokutshaja ngokukhanya kwecuba lemoto.
Andazi ukuba kutheni kodwa ezinye zifana kakhulu nezo zithengiswa nguApple nge-iPad yayo. Kubonakala ngathi ukucinga kwabayili kuyindawo yokubanda.
Njengoko sibona uluhlu olupheleleyo lwezinto ezincedisayo eziza kwenza ubomi bethu kunye nethebhulethi ukuba yonwabe, ewe le iphambi kokuyihlawulela. Siyathemba ukuba ivenkile esempuma ithatha iimodeli zayo kwezi zixhobo kunye nexabiso eliphantsi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ezinye izixhobo » I-Samsung Galaxy Tab iza kulayishwa ngezixhobo, ukulungiselela isipaji!